Iindaba - Zeziphi izixhobo zesixhobo sokucheba ingca
Zeziphi izixhobo zesixhobo somatshini wokucheba ingca
Zeziphi izinto ezenziwayo umtshini wokucheba ingca unayo? I-Zhengchida Blade Factory iya kwenza uhlalutyo lobugcisa kuthi.
Isixhobo sesixhobo siyinto ebalulekileyo emisela ukusebenza kwesixhobo, esinempembelelo enkulu ekusebenzeni kakuhle, kumgangatho wokuqhubekeka, ekuqhubekeni kweendleko nasekuqineni kwesixhobo.
Okukhona kusiba nzima isixhobo sezixhobo, kokukhona kuya kuba ngcono ukunganyangeki kokunxiba, kokukhona ubunzima busezingeni, kokukhona ubunzima bempembelelo busezantsi, kwaye kokukhona izinto zibukrakra. Ukuqina kunye nobulukhuni zizinto ezimbini eziphikisanayo, kwaye ikwangumba ophambili ekufuneka izixhobo woyise. Izixhobo zegraphite, ukutyabeka okuqhelekileyo kwe-TiAIN kunokukhethwa ngokufanelekileyo ekukhetheni izinto ezinobunzima obungcono, oko kukuthi, umxholo we-cobalt uphezulu kancinci; izixhobo zegraphite ezifakwe idayimane, ubunzima bunokukhethwa ngokufanelekileyo ekukhethweni kwezinto. Oko kukuthi, umxholo we-cobalt uphantsi kancinci. Isingeniso esineenkcukacha malunga iincakuba zokucoca ingca
Iincakuba Mower ungenziwa ngemfuneko
Ukusetyenziswa kwemicu yokucheba ingca: kusetyenziselwa ukusika iintyatyambo zegadi kunye namatyholo amancinci enobubanzi kunye nezinye izinto isixhobo sokucheba ingca Umatshini osetyenziswayo
Izixhobo zokucheba ingca zikulungele ukusika izinto: imida yentsimi, amanzi kunye neentsimi ezomileyo, ingca, iindlela zekhonco, ukhula lwasemlanjeni, iindawo zokucheba ingca, izihlahla ezinobubanzi obuncinci, uqalo olucekeceke, iingcingo
Ubume kunye nomgaqo osebenzayo wombane wokucoca umbane
Umatshini wokucheba ingca: Umatshini wokuvuna ifula osika amadlelo okanye ezinye izityalo ezinokwenziwa ifula kwaye uyibeke emhlabeni. Zimbini iintlobo zokuphindaphinda nokujikeleza. Ukuphindisela kwakhona kumatshini wokucheba ingca: Ukuthembela kwintshukumo yokucheba ehambelana nemela kunye nemela esisigxina kwisinqumleli ukusika ifula. Uphawu lwayo kukuba ukusika iindiza zicocekile, amandla afunekayo ngeyunithi yokusika ububanzi incinci, kodwa ukuziqhelanisa nokukhula kwamazwe ahlukeneyo kwefula kuhlwempuzekile, kwaye kulula ukuyivimba. Ilungele umhlaba othe tyaba wendalo kunye nengca eyenziweyo enemveliso ngokubanzi. Ngenxa yentshukumo enkulu yomsiki ngexesha lokusebenza, ukwanda kwesantya sokusebenza kuncitshisiwe. Isantya sokusika imela yokuhamba ngokubanzi siphantsi kwe-3 m / s. Isantya sangaphambili somsebenzi ngokubanzi yi-68 km / h. Itrektara inyusa umatshini wokucheba ingca: ulwakhiwo olulula, ukukhanya, ukushukumiseka kwaye ubhetyebhetye. Zintathu iindidi zokumiswa ngaphambili, ukunqunyanyiswa kwicala kunye nokumiswa ngasemva. Emva kwexesha ii-mowers zokumisa zezona zisetyenziswa kakhulu.
Kulungile, masazise iindlela ezininzi zokucheba ingca.
UZhengchida ugxile ekuveliseni iincakuba zokucheba ingca, wamkelekile ukwenza kunye nokuthenga!